Gudidii dib u heshiisiinta gobolka gedo oo gaadhey garbahaarey +sababta. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Gudidii dib u heshiisiinta gobolka gedo oo gaadhey garbahaarey +sababta.
Gudidii dib u heshiisiinta gobolka gedo oo gaadhey garbahaarey +sababta.
Guddiga dib u heshiisiinta ee Gobolka Gedo ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa Maanta gaaray Magaalada Garbahaarey ee xarunta Gobolkaas.
Tagitaanka guddigaan ee Garbahaarey ayaa kuso aadayo xilli Maamulka Gobolka Gedo ee taagersan Farmaajo ay sheegeyn inuusan wax xidhiidh ahi kala dhaxeyn madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, islamarkaana ay fursad siinayaan inta uga hadhey waqtigiisa, oo ay ku sheegeen illaa bisha soo socota August.
Guddoomiyaha gobolka Gedo, Axmed Buule Maxamed (Canjeex) oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in maadaama uusan xidhiidh ka dhaxeyn maamulkiisa iyo maamulka Kismaayo, aysan aqbali doonin guddiga doorasho oo heer maamul-goboleed ah oo laga soo magacaabay magaalada Kismaayo.
Khilaafka ka taagan kuraasta yaa Gobolka Gedo ayaa kamid ah sababaha dib u dhigaya doorashada Soomaaliya, waxaana hadda laga war sugayaa natiijada kasoo baxdo dadaalada ay wadaan guddiga uu Rooble magacaabay.
Villa Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay Gobolka Gedo, waxayna gacan ku heynta gobolkaas kala wareegtay Maamul Goboleedka Jubbaland, waxaana socdo loolan ku aadan 16-ka kursi ee yaa Gedo.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonto 10 October 2021 sida lagu qoray heshiiskii 27 May madaxda Maamul Goboleedyada iyo Ra’isulwasaare Rooble ku dhex maray Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inkastoo la qiyaasayo inay waqtigaas ka dib dhacdo sababo la xidhiidha khilaafka ka taagan Gedo iyo Beledweyne.
Previous articleImaaraadka carabta oo safaraad ka furtey israa’iil.
Next articleKooxda daalibaan oo hanjabaad adag udirtey dalka turkiga.